ဧရာဝတီ| November 16, 2012 | Hits:74
1 | | နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် ရန်ကုန်သို့ လာရောက်သည့်အခါ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားအနေဖြင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားရန် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်အား ရွေးချယ်ထားကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်က အတည်ပြုပြောဆိုလိုက်သည်။ မဟာဗျူဟာ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသား လုံခြုံရေး လက်ထောက် အကြံပေး မစ္စတာ ဘန်ရုဒ်က သတင်းထောက်များကို ပြောဆိုရာတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် ၁၉၃၀ ခုနှစ်များတွင် လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု၊ ထို့နောက် အာရှတွင် ဦးဆောင်တက္ကသိုလ်ကြီးတခု၊ ၁၉၈၀နှောင်းပိုင်းတွင် ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုများဖြင့် သမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်သောကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပိုလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တွေ့ဆုံမည်
ထားဝယ် ရေနက်စီမံကိန်း၌ ထိုင်း ဘီလီယံ ၃၀ ကျော် သုံးစွဲမည်
ဂျပန်က စားနပ်ရိက္ခာအတွက် မြန်မာသို့ ဒေါ်လာ ၂၁ သန်းလှူ
ဂျပန် ဘိုးဘွားရိပ်သာများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် မြန်မာ အလုပ်သမားများ ခေါ်မည်
ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ တရားမဝင်ကြောင်း ကြေညာ
3 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website drsoemin November 17, 2012 - 4:17 pm	welcome , President Obama.
မန္တလေးတိုင်းအစိုးရ အာမခံချက်များကုို စောင့်ကြည်မည့် လွှတ်တော်ကော်မတီဖွဲ့စည်း
မူးယစ်ဆေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးရေး တရုတ်- မြန်မာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်မည်